လမ်းဘေးနေ အိုးအိမ်မဲ့တွေ ကနေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့ပွားမှာကို လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် စိုးရိမ်နေ
လမ်းဘေးနေ အိုးအိမ်မဲ့တွေ ကနေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် က...
23 มี.ค. 2563 - 23:26 น.
လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့မှာ စာရင်းသွင်းထားတဲ့ လမ်းဘေးအိပ်သူတွေကို အရင်ဆုံး ဟော်တယ် အခန်းပေးဖို့ စီစဉ်နေ
လမ်းဘေးအိပ် လမ်းဘေးစားတဲ့ အိမ်ခြေရာမဲ့တွေ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရတဲ့ အရေးက ကာကွယ်နိုင်အောင် လန်ဒန်က လွတ်နေတဲ့ ဟော်တယ် အခန်းတွေမှာ နေရာပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။
ကနဦး စမ်းသပ်တဲ့ အစီအစဉ် အနေနဲ့ လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့တွေမှာ စာရင်းပေးထားတဲ့ အိမ်ခြေရာမဲ့တွေကို လွတ်နေတဲ့ ဟော်တယ် အခန်း ၃၀၀ လောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေတုန်းက နေရာချထားခဲ့တာပါ။
လာမယ့် ၃လ အတွင်း နိုင်ငံတကာ ဟော်တယ် အဖွဲ့တခု ဖြစ်တဲ့ Intercontinental Hotels Group (IHG)က စျေးလျှော့ပေးတဲ့ ဟော်တယ် အခန်းတွေမှာ စီစဉ်ပေးဖို့ လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် ရုံးက ကြိုးပမ်း လျက် ရှိပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပြဿနာကြောင့် ဧည့်သည် မလာတဲ့ လန်ဒန်မြို့လယ်က ဟော်တယ်တွေမှာ အခန်းအလွတ် အများအပြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် အခုလို စီစဉ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာ မတ်လ၂၀ ရက်နေ့ တုန်းက ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က စားသောက်ဆိုင်တွေ ၊ အဖျော်ယမကာဆိုင် ၊ ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့ နေရာတွေ ပိတ်ပစ်ဖို့ ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေ မတ်လ ၂၁ နဲ့ ၂၂ ရက်တို့မှာ ရာသီဥတု ကောင်းမွန် ပြီးနေသာတာကြောင့် လန်ဒန်က ဟိုက်ပါ့ခ် နဲ့ ဘက်တာဆီး ပန်းခြံတို့မှာ လူအများအပြား စည်ကားခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ပြင် မထွက်ဖို့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက် ကို ဆန့်ကျင်ကာ ဟိုက်ပါ့ခ်မှာ ကျန်းမာရေး လုပ်သူတွေ ပြည့်နှက်
ဗိုင်းရပ်စ် ကူးမှာကို မစိုးရိမ်ကြဘဲ ဘက်တာဆီး ပါ့ခ်မှာလည်း အပျော်တမ်း လေ့ကျင့် မြင်းစီးသူတွေနဲ့ စည်ကား
အခုလို လမ်းဘေးအိပ် လမ်းဘေးစား သူတွေ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုဒဏ်က ကာကွယ်နိုင်အောင် သူတို့ကို ဟော်တယ် အခန်းတွေမှာ နေရာချထားဖို့ ကိစ္စဟာ အရေးကြီးလှတယ်လို့ လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် ရုံးက ပြောပါတယ်။
အိမ်ရာမဲ့ သူတွေဟာ နဂိုကတည်းက အခက်အခဲ ရင်ဆိုင်နေရပြီး အနာဂတ် ဘဝ မသေချာလှတဲ့ အတွက် သူတို့ကို လုံခြုံမှုပေးသလိုမျိုး လန်ဒန်မြို့သား အားလုံးကလည်း သူတို့ အတွက် အကောင်းဆုံး အကာအကွယ် ပေးသင့်တယ်လို့ မြို့တော်ဝန် ဆာဒစ်ခန်း က ပြောပါတယ်။
စိန့်မွန်ဂို အိုးအိမ်မဲ့သူများ ကယ်ဆယ် ကူညီရေး အဖွဲ့က ဒါရိုက်တာ ပက်ထရာ ဆယ်လ်ဗာ ကလည်း အခုလို ကိုရိုနာဘေး ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာ သူတို့အဖွဲ့သားတွေက အိမ်ရာမဲ့တွေကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ နာရီနဲ့ အမျှ အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လန်ဒန်မြို့လယ်မှာ လူသွားလူလာ ကင်းမဲ့လျက် ရှိပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေလည်း ရပ်ဆိုင်းထားကြတာကြောင့် အိမ်ခြေရာမဲ့တွေ အတွက် အလှူငွေလည်း လျော့နည်းလာမယ့် အရေးကို စိုးရိမ် မိတယ်လို့ စတိဗ် ဖော့လ်ခ် က ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်၊ မြန်မာနားဝိုင်းနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်
ကိုရိုနာကြောင့် ချယ်ရီတွေခမြာ ခံစားသူမဲ့ ညှိုးရရှာပေါ့
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့တုန်းက လန်ဒန်မြို့လယ် တလွှား လှည့်လည် အလှူခံစဉ် သူဟာ အိုးအိမ်မဲ့တွေ အတွက် အလှူငွေ ပေါင် ၄၀၀ လက်ခံရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကတော့ အိမ်ခြေမဲ့တွေနဲ့ အလုပ်သွားသူတွေ ရောနှောနေကြပေမယ့် အခုတော့ အဲလို မဟုတ်တော့ဘဲ အိမ်ရာ မဲ့တွေချည်း ကျန်ခဲ့တာပါ ၊ အခု အပြင်မှာ တွေ့ရသူ တဝက်လောက်ဟာ အိုးအိမ်မဲ့တွေပါ ၊ သူတို့ကို သီးခြားစီ ထားပေးဖို့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။
အိုးအိမ်မဲ့တွေကို ဟော်တယ် အခန်း ပေးပေမယ့် သူတို့က သွားမနေကြပါဘူးလို့ Big Issue သတင်း ဂျာနယ် ထုတ်သူ က ပြောပါတယ်။
ချယ်ရင်းခရော့စ် ရထားဘူတာ အပြင်ဖက်မှာ အိုးအိမ်မဲ့တွေ အများကြီးပါ ၊ သူတို့တွေကို ဟော်တယ်တွေမှာ မထားလို့ အဲဒီနား တဝိုက် သူတို့ ခြေရာထပ်နေတာလား ၊ ဟော်တယ်တွေမှာ သူတို့ကို အခန်းပေးတယ် ဆိုရင် သူတို့ ဘာလို့ အဲဒီနား ရှိနေကြသလဲ ၊ သူတို့ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ဟေးလားဟားလား လုပ်နေတာလား ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
လန်ဒန်မြို့လယ်မှာ လူတွေ တယောက်နဲ့ တယောက် ခပ်ခွာခွာ နေကြရမယ့် ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာတာ မတွေ့ပါဘဲ အထူးသဖြင့် လန်ဒန် အနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် လမ်းတွေပေါ်မှာ စျေး၀ယ်ခြမ်းသူတွေ ပြည့်နှက် နေခဲ့ပါတယ်။
လန်ဒန် မြို့လယ် က ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အများအပြား လည်ပတ်ရာ နေရာတွေမှာ ခြောက်ကပ်လျက်ရှိ
လန်ဒန်မြို့လယ်က ရီးဂျင့် လမ်းမကြီး တလျှောက်မှာ ဆိုင်အများအပြား ပိတ်ကုန်ပြီး ဖွင့်တဲ့ဆိုင် တချို့ ဆိုရင်လည်း တချိန်မှာ လူတယောက်သာ ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပီကာဒလီ ဆားကပ်စ်က ဝါးတားစတုန်း လို စာအုပ်ဆိုင်တွေတော့ ဆက်လက် ဖွင့်ထားပြီး လူအနည်းအကျဉ်းလောက်သာ ဆိုင်ထဲ စာအုပ်ရှာ နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆောက်သ်ဘန့်ခ် နဲ့ ရစ်ချ်မွန် ပါ့ခ် လို နေရာ အများအပြားမှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူလည်းလုပ်တွေ ရှိသလို ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၊ အဖျော်ယမကာ နဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေ လည်ပတ်ရာ နေရာတွေကတော့ အရင်လို မစည်ကားတော့ပါဘူး။
အိမ်ခြေယာမဲ့တွေကို အခမဲ့ စားသောက်စရာ ဝေငှ
လန်ဒန် တက္ကစီကားမောင်း သမားတွေက အခုလို အိုးအိမ်မဲ့တွေကို ဟော်တယ်တွေဆီ ကားမောင်း ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
တကယ် အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေ အခုလို ကပ်ဘေး ကြုံနေရချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လန်ဒန် တက္ကစီ မောင်းသမားတွေက အမြဲတမ်း ကူညီဖို့ အသင့်ပါဘဲလို့ လိုင်စင် တက္ကစီ မောင်းသမားများ အသင်း အတွင်းရေးမှူး စတိဗ် မက်ခ် နာမာရာ က ပြောပါတယ်။
လန်ဒန် တက္ကစီ ကားမဲလေးတွေဟာ သန့်ရှင်းရေး ရလွယ်ပြီး ပိုးမွှား ရောဂါ ဘယ ကင်းအောင် လုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ၊ ကားစီးသူနဲ့ ကားမောင်းသူလည်း အကန့်နဲ့ ခွဲထားပါတယ်လို့ သူက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် သီတင်းပတ်ကစပြီး Big Issue သတင်း ဂျာနယ် ဟာ သတင်းစာရောင်းသူတွေ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးခံရခြင်းမှ ကင်းဝေး နိုင်အောင် စာစောင် မရောင်းတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျာနယ် ရောင်းသူ အများစုဟာ အိမ်ခြေမဲ့တွေ ဖြစ်ပြီး အခုလို အရောင်းရပ်တဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ စားစရာ ရနိုင်ရေးကို တခြားနည်းလမ်းနဲ့ ရှာသွားမယ်လို့ လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လမ်းဘေးနေ အိုးအိမ်မဲ့တွေ ကနေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့ပွားမှာကို လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် စိုးရိမ်နေ